असारे विकास : सात दिनमा एक करोड सक्ने योजना : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks असारे विकास : सात दिनमा एक करोड सक्ने योजना
कालिकोट । जिल्लाका अधिकांश स्थानिय तहमा असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ । मुलुक संघिय संरचनामा गएपनि स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको मिलेमतोमा असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अन्र्तरगत आएको सो आयोजना एक करोड खर्च गर्नुपर्ने छ । असार २० गते सम्म एक करोड खर्च गरि सक्नु पर्ने नियम छ । एक करोड सकाउनकै लागि रातदिन नभनि काम भइरहेको छ । दश दिनमा एक करोड खर्च गर्दा योजनाको गुणस्तर कस्तो बन्ला ? गत वर्ष पनि रंगशाला निर्माणका लागि आएको एक करोड वजेट जनताको आँखामा छारो हालेरै सकिएको थियो ।
एक करोड सकाउनकै लागि रातदिन नभनि काम भइरहेको छ । दश दिनमा एक करोड खर्च गर्दा योजनाको गुणस्तर कस्तो बन्ला ? गत वर्ष पनि रंगशाला निर्माणका लागि आएको एक करोड वजेट जनताको आँखामा छारो हालेरै सकिएको थियो
प्रदेश सरकार मार्फत आएका धेरै जसो योजनाहरुको निर्माण भर्रखर शुरु भएको छ । प्रदेश सरकार अन्र्तरगत खाँडाचक्रमा आएको ताडि देखि राराघाट सम्मको सडक निर्माण, फोरा बान्ना नैनकुन्ज सडक, जिमजेढि खानेपानि, जनजिवन मावि, दशाला माविको भवन निर्माण, लगायतका योजनाहरु असारमै सम्झौता र असारमै विकासका काम शुरु भएका छन् । विषेश अनुदान तर्फ आएको वजेट २० लाखले नगरपालिकाका ११ वटै वडाहरुमा वाख्रा वितरण गर्ने नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत्र खड्क प्रसाद उपाध्यायले बताए । यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाहरु पनि अहिले धमाधम सुरु हुन लागेको छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४ लाख पुग्यो, विश्वभर १७ हजार बढीको मृत्यु
भर्खरै Roshan Shrestha - March 24, 2020 0
वासिङ्टन । आक्रामक रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को.संक्रमण विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिएको छ । मंगलबारसम्म विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब ४ लाख...
अर्थ Roshan Shrestha - August 28, 2020 0
खेल Kumar Raut - August 3, 2020 0